Mujaahidiinta Alshabaab Oo La Wareegay Deegaanka Deynuunaay. – Calamada.com
Mujaahidiinta Alshabaab Oo La Wareegay Deegaanka Deynuunaay.
Wararka ka imaanaya gobalka Baay ayaa sheegaya in saaka aroorii ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin weerar qorsheysan ku qaadeen deegaanka Daynuunaay oo ka mid ah deegaanada dhaca duleedka degmada Baydhabo.
Deegaanka waxaa ka dhacay dagaal muddo kooban socday’iyadoona markii dambe gabi ahaan maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ay isaga carareen deegaanka oo qiyaastii 18 km u jira magaalada Baydhabo.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in Mujaahidiinta si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta deegaanka’waxeyna sidoo kale ciidamada Mujaahidiinta gacanta ku dhigeen gaari nooca raaxada ah oo maleeshiyaatka Ridada goobta kaga carareen.
Sidoo kale wararka laga helayo deegaanka Daynuunaay ayaa sheegaya in dagaalka saaka lagu gubay gaari dagaal oo ay la haayeen maleeshiyaatka dowlada’iyadoona sidoo kale dagaalka lagu dilay tiro askar ah oo ka tirsan maleeshiyaatka Amxaarada kabo qaadka u ah.
Halkan Ka Dhageyso Dagaalka Daynuunaay.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 19-07-1437 Hijri.
Next: Kamiin Hub Lagu Qabsaday Oo Ka Dhacay Duleedka Baydhabo.